Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. तिहारको आगमनसँगै पाल्पाली ढाकाको व्यापार बढ्दै – Emountain TV
पाल्पा, २२ कात्तिक । तिहारको आगमनसँगै पाल्पाली ढाकाको व्यापार पनि बढ्दै गएको छ । तिहारमा दिदी बहिनीहरुले दाजुभाईलाई ढाकाको टोपि उपहार दिने प्रचलनले गर्दा ढाकाको व्यापार वढ्दै गएको हो ।
पाल्पा तानसेनका ढाका पसलहरुमा दाजुभाईको लागि टोपी, आस्कोट, टाई, व्याग र दिदी बहिनीको लागि पछ्यौरा साडी, कुर्ता सुरुवाल, ब्याग, पर्स, लगायतका उपहारका सरसमान किन्नेको भिड बढेको छ ।
टिका र मालाको साथै शिरमा ढाका टोपी लगाउँदा नेपालीपन झल्कने हुँदा पाल्पाली ढाका मानिसको रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।
उपभोक्ताहरुको चाहाना अनुसार ढाकाको सामानमा बिबिधिकरण भएपछि पाल्पा घुम्न आउने आन्तरीक तथा बाह्रय पर्यटकले ढाकाका सामाग्रीलाई उपहार र मायाको चिनोको रुपमा लैजाने चलन भएकाले पनि ढाकाको व्यवसाय दिनहुँ फस्टाउँदै गएको हो ।
तानसेनमा मात्र हाल करीब १० वटा ठुला ढाका उद्योग रहेका छन् भने जिल्ला भरी नै घरेलु तानबाट ढाका बुन्ने संख्यामा दिनहुँ बृद्धि भैरहेको छ । १ वटा पाल्पाली ढाका टोपीको मुल्य १ सय रुपैयाँ देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म रहेको छ ।
अहिलेसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाल्पामा २४ वटा पाल्पाली ढाका कपडा उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १९ वटा ढाका कपडा उद्योग क्रियाशील अवस्थामा छन् भने करीब ५ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
ढाका बुन्ने कामदारहरुले मासिक ५ हजार देखि २५ हजार सम्म कमाइ हुने गरेको बताउँछन् । गत बर्ष १० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा कारोवार भएको पाल्पाली ढाका यस बर्ष १२ करोड सम्मको कारोवार हुने उद्योगीको भनाई छ ।
२०१५ सालमा एउटा तानबाट शुरु भएको पाल्पाली ढाका अहिले देशकै गौरबको रुपमा परिचित छ । पाल्पाली ढाका जस्तै यस्ता घरेलु उत्पादनको लागि सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाएमा मात्र स्वदेशी उद्योग फस्टाउने देखिन्छ ।